Filma fohy mampiseho hoe ahoana izany mainty ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Tsy maintsy nianatra nizaka fanesoam-panavakavaham-bolonkoditra nataon'ny mpiara-mianatra aminy vaovao ilay zazalahy
Voadika ny 02 Jolay 2020 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, عربي, Ελληνικά, Português, 한국어, Català, Deutsch, Español, 日本語, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary “Born With It” avy amin'ny kaonty Vimeo hitam-bahoaka an'i Emmanuel Osei-Kuffour Jr.
“Born With It” [Teraka misy an'io], filma fohy nataon'ilay tale amerikana Emmanuel Osei-Kuffour Jr. no milaza ny tantaran'i Keisuke Fujii, zatovolahy izay niovaova sekoly rehefa nifindra avy ao Tokyo handray asa vaovao any ambanivohitra ny reniny. Tsy maintsy nizaka sy nianatra, araka ny niainany azy ihany, ny fomba hiatrehana ireo fanesoana mpanavakava-bolonkoditra nataon'ny mpiara-mianatra aminy vaovao ilay zazalahy, izay sady mainty no Japoney.
Nivoaka voalohany tamin'ny taona 2015 ity filma fohy an'i Osei-Kuffour ity, saingy vao haingana no nahaliana taorian'ny fiaraha-mijery notontosain'ny Japan Society ao New York City sy ny the Japan-American Society of Houston tamin'io volana jona 2020 io.
Niasa ho mpanatontosa filma i Osei-Kuffour tao Singapaoro sy Japana, ary monina ao Etazonia izy amin'izao fotoana izao. Ny tantaraina voalohany ao amin'ny filma dia lalaovin'ilay teraka Japoney Dadie Takagasugi, izay Japoney ny reniny ary Ghaneana ny rainy. Tao amin'ny antsafa i Osei-Kuffour nilaza fa nahazo hevitra ny hanao ny “Born With It” izy rehefa niaina fanavakavaham-bolonkoditra nandritra ny fotoana naha-mipianatra haka diplaoma azy tao Singapaoro, saingy nolazainy fa nametraka ilay Keisuke holalaovina avy amin'ny fifanakalozan-dresaka nifanaovany tamin'ireo Japoney sakaizany nandova mainty sy ny zava-niainan-dry zareo rehefa nihalehibe tao Japana ihany koa izy.
“Manantena aho fa hanampy ireo mahatsapa ho hafa ho tsy hanirery sy hatoky tena kokoa amin'ny maha-tsy manampaharoa azy ireo ity filma-ko ity,” hoy i Osei-Kuffour tao amin'ny antsafa fotoana fohy taorian'ny famoahana ny filma.
Misy filman'i Osei-Kuffour hafa fohy ihany koa vonona hojerena anabaka (antserasera), ka anisan'izany ny “The First Time” sy ny “When Doors Open“. Azo jerena manontolo ao amin'ny Vimeo kosa ny “Born With It”.